शिल्पालाई छेउमा राखेर खरो उत्रिइन् करिश्मा, प्रकाश र छविलाई दिइन् यस्तो चे’तावनी ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 24, 2021 AdminLeaveaComment on शिल्पालाई छेउमा राखेर खरो उत्रिइन् करिश्मा, प्रकाश र छविलाई दिइन् यस्तो चे’तावनी ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । नायीका शिल्पा पोखरेले अब आफु काममा मात्र केन्द्रित हुने बताएकी छन् । आफ्ना बारेमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका कुरालाई ध्यान नदिएर काममा केन्द्रित हुने उनले बताइन् । नयाँ म्युजिक भिडियोको प्रमोशनका लागि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएकी शिल्पाले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनी श्रीमान छवि ओझाका कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छन् । छविले शिल्पाका बारेमा कुरा गर्दै मिडियावाजी गरेका कारण उनको चर्चा भएको छ । उनी आफ्ना पति छवि ओझासंगको सम्बन्ध विच्छेदको मु द्दा का विषयमा चर्चामा रहेकी हुन् । टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले उनका बारेमा कार्यक्रम निर्माण गरेपछि शिल्पाले आफ्ना बारेमा मनगढन्ते कुरा उल्लेख गरेर ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा समाचार बनाएको भन्दै वि’रोध गरेकी थिइन् । उनले दिएको उजुरीका कारण एपीवान टेलिभिजनवाट प्रशारण हुने रजतपट कार्यक्रम निलम्बनमा परेको छ ।
करिश्माले अदालतमा विचाराधिन भएको विषयमा अनावश्यक रुपमा अरुले टिप्पणी गर्न नहुने बताइन् । सम्झना परियारले शिल्पालाई सहयोग गर्दै आएकी छन् । टेलिभिजनमा प्रशारण रोक्का गरिएको रजतपट प्रकाशले युट्युव मार्फत प्रशारण गरेपछि त्यस विरुद्ध पनि जाने सम्झनाले बताइन् । उनले पोको पारेको गीता भन्दै झु टो कसम खाएको आ’रोप लगाइन् । भिडियो हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः